युगसम्बाद साप्ताहिक - कुनै दिन सुस्ता पनि हराउँछ नक्साबाट
Wednesday, 11.13.2019, 12:26am (GMT+5.5) Home Contact
कुनै दिन सुस्ता पनि हराउँछ नक्साबाट
Tuesday, 09.11.2018, 12:31pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । नेपालको निशानाछापमा कालापानी क्षेत्रको छ हजारदेखि सात हजार हेक्टर भूमि गायब गरेर नेपालको नक्सा बनाएर प्रचलनमा ल्याइयो । भारतको अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि आफ्नै नक्साबाट गायब हुनु प्राविधिक त्रुटी मान्ने कि मिचिएको भूमि भारतलाई बुझाउने खेल मान्ने ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद छ । एक किसिमले भन्ने हो भने विवाद नभएर भारतको अतिक्रमणमा परेको छ नेपाली भूमि र यो क्रम अहिले पनि जारी छ । नेपाल विभिन्न जिल्लामा सीमा स्तम्भ सार्नेदेखि मिल्काउने र दशगजामा बस्ती बसाउने काम भारतीय पक्षबाट पटकपटक हुँदैआएको छ भने सुदूरपश्चिमको दार्चुलास्थित कालापानीमा त भारतले सैन्य क्यनाम्प नै खडा गरेको छ ।
भारतले अतिक्रमण गरेको सबैभन्दा धेरै भूमि कालापानी नै हो । त्यसपछि नवलपरासीको सुस्ता पर्न आउँछ । सुस्ता र कालापानी बाहेक अन्यत्र सीमा समस्या नरहेको भन्दै भारतले एक दशक अघि नै नक्सा तयार गरेर नेपाललाई हस्ताक्षरका लागि पठाएको थियो । भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री (हाल पूर्व राष्ट्रपति) प्रणव मुखर्जीले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा विवाद ९८ प्रतिशत समाधान भएको र यसको नक्सांकन गर्ने कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताएर सो नक्सामा हस्ताक्षर गर्न पटकपटक दवाव दिएका थिए । तर नेपालमा यसको व्यापक बिरोध भएपछि रोकियो ।
अहिले भने सरकारले निशाना छापमै कालापानीको भूमि गाब गरेर नेपालको नक्सा बनाएको पाइएको छ । सरकारले भारतले चाहेजस्तै नक्सा किन बनायो भन्ने प्रश्न अहिले तातो बहसमा छ । भारतले सुस्ताको १६ हजार हेक्टरमध्ये १४ हजार हेक्टर भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ । कालापानीमा ३७ हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको छ । यस्तोमा सरकारले नै राखेका अधिकांश नक्सामा दार्चुलाको कालापानी छुटाएको पाइनु सो भूमि भारतलाई बुझाउने खेल त हैन भन्न सकिने स्थिति छैन ।
नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले देशको निसानी मानिने निसान छापमा राखिएको नक्सै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पहिलाको नक्साबाट कालापानीको ठूलो भू–भाग हटाइएको पष्टि गर्नुभएको छ । यतिमात्र हैन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेब साइटमै अपूरो नक्सासहितको निसान छाप राखिएको छ । हेलो सरकार, गृहमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका ट्वीटरमा पनि त्यही छ ।
ती नक्साबाट वैज्ञानिक मापन गर्दा कालापानीको ६ हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि गायब छ । कुनै साइटमा सात हजार ९ सय हेक्टरसम्म गायब भएको नक्सा प्रयोग गरिएको छ । श्रेष्ठका अनुसार कतिपय नक्सामा सुस्तामा पनि समस्या छ ।
पछिल्लो समय नेपाल र भारतका प्रबुद्ध वर्गको अन्तिम बैठकले दुई देशबीचका सीमा विवाद लगायत सन्धि, सम्झौता र सहमतिहरुको कार्यान्वयनका लागि दुबै देशका प्रधानमन्त्रीहरुलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेका बेला नेपालको निशाना छापमै कालापानी हराउनु आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्तिबीच भएको बैठकहरुमा नेपालले सीमा क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचनाहरु हटाउन माग गर्दैआएको थियो । भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका अबैध बाँधका कारण वर्षेनी हजारौं हेक्टर नेपाली भूमि डुबानमा पर्दैआएको छ । त्यस्तै भारतले सडकको नाममा पनि पानी निकास थुन्ने संरचना बनाउन छाडेको छैन । यसका अतिरिक्त नेपालले कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने मत राख्दै आएको भए पनि भारतीय पक्षले यसमा खासै चासो दिएको छैन । अब समूहको प्रतिवेदनकै प्रतिक्षा गर्नुपर्छ ।
कालापानीलाई भारतले षड्यन्त्रपूर्वक आफ्नो भूमि बताउँदै आएको छ । सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनी उल्लेख गरिएको छ । पुरानो नक्शामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली नदी भनिएको छ । यो वास्तविक काली नदीलाई सीमा मान्दा त्योभन्दा पूर्व कालापानी पर्छ र कालीपानीभन्दा पनि पूर्व लिपुलेक भञ्जाङ पर्दछ । त्यसैले काली नदी पूर्वको त्यो ठूलो पहाडी भूभाग नेपालमा पर्दछ । तर भारतले काली नदीभन्दा धेरै पूर्व काली देवीको सानो मन्दिर बनाएको छ । त्यहाँबाट एउटा सानो सोता निस्किएको छ । भारतले यसैलाई काली नदी हो भनी व्याख्या गर्ने गरेको छ । यो गलत व्याख्या गर्दै नेपालको ३७ हजार हेक्टर भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।
यस्तै अपव्याख्याको शिकार भएको छ सुस्ता । सुगौली सन्धि भएको बेला नारायणी नदीले सीमाको काम गरेको थियो । तर पछि आएर नारायणी नदीले धार परिवर्तन ग¥यो । यो नेपालको भूभागबाट बहन थाल्यो । नदीपारि भारततिर रहेको भूभाग माथि भारतले आफ्नो भनी दाबी गर्न थाल्यो । वि.स. २०११ मा नारायणीमा सबैभन्दा ठूलो बाढी आएपछि नारायणी नदी नेपालको भूभाग भित्र घुस्यो । २०३२ सालको भेलबाढीले नेपालको ठूलो भूभाग बगाएर लग्यो । नारायणी नदीले यसरी नेपालका ठूला ठूला भूभागहरु भारततिर छोडेर नेपालतिर प्रवेश ग¥यो ।
स्मरणीय के छ भने– सन्धि भएको बेलामा नदी जुन ठाउँबाट बहेको थियो, त्यसैलाई नै सीमा मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहिआएको छ । यो नेपालको लागि पनि लागू हुन्छ । नदी उत्तर बगोस् वा दक्षिण, सीमा परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले सन् १८१६ मा नारायणी नदी जहाँ बगेको थियो, त्यही नै नेपाल भारतको सीमाना हो । पुरानो नक्लामा महाकाली नदी जुन हो त्यही यथार्थ हो । भारतको बलमिच्याइबिरुद्ध एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेलामा सरकारले नै निशानाछापमा आफ्नै भूमि गायब गरेर प्रकाशन गर्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो ।